ဒေါက်တာ ဗိုက်ကလေး www.drbikalay.com " အန်တီ သီတာ "(စ/ဆုံး) 18+
ကျတော်ဆယ်တန်းဖြေပြီးတော့... အလုပ်လုပ်ရန်..ရန်ကုန်မြို့သို့.. တက်လာပါသည်။ဦးလေးအိမ်ရောက်တော့.. ဦးလေးမိန်းမ..မသီတာနဲ့ပဲတွေ့တယ်.. သူ့ယောက်ကျား...အညာဘက်မှာ.. အာလူး ၊ကြက်သွန်သွားတင်တယ်။ ဦးလေးပြန်လာမှ..အလုပ်ရှာပြောတယ်။ ခဏနေတော့..ဦးလေးဆီဖုန်းဆက်တယ်.. ကျတော်ရောက်နေတဲ့အကြောင်း... ဘာတွေပြောလဲတော့..မသိဘူး။
ပြီးမှ..'' မင်းမင်း ရေ..နင့်ဦးလေးက..အိမ်မှာပဲနေ.. ဘယ်မှမသွာနဲ့တဲ့..ငါ့နဲ့လောလောဆယ်.. ဈေးဝိုင်းရောင်းတဲ့..သူ ပြန်လာရင်..အလုပ်ရှာပေးမယ်တဲ့''.. ''ဟုတ်..မမသီတာ..''ကျတော်က.. တောကတက်လာတဲ့သူဆိုတော့.. ရန်ကုန်အိမ်လေးက..ကျတော့အတွက် ကျဉ်းနေသလိုပဲ...ဘယ်တက်နိုင်မလဲ.. ကိုယ်ကအလုပ်လု
ပ်ချင်တာကို... ရပ်ကွက် ဆိုင်ဆိုတော့.. ဝယ်သူတော့များသား... တနေ့တနေ့..ဈေးရောင်းလိုက်.. အိမ်အလုပ်ကူလုပ်လိုက်နဲ့..အချိန်တွေ ကုန်နေတယ်...ဦးလေးနဲ့မသီတာ.. အိမ်ထောင်ကြတာ..၃..နှစ်လောက်ရှိပြီ.. ကလေးမရသေးဘူး. မသီတာက..မွန်.စပ်တဲ့သဘောရှိတယ်.. အသားလည်းဖြူတယ်..လက်ပြတ်.. ခါးတိုဝတ်တော့.. လက်မောင်းသားတွေက..ပြည့်တင်း ဝင်းဝါတယ်..ခါးကသိမ်ပြီး..တင်သားများက.. ထင်ရှားစွာ..ပေါ်လွင်နေတယ်..ဖင်ကြီးတွေ.. ကော့ပြီး..တုန်ခါနေတယ်..ကျတော်လည်း.. လူပျိုဝင်ကာစဆိုတော့..ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ကို.. စိတ်ဝင်စားစွာ. .ကြည့် တက်နေပြီ...ဈေးရောင်းပြီး မှချက်ပြုတ်စား သောက်ကြသလို.. တခါတရံတော့.. ချက်ရင်းဈေးရောင်းတယ်..ရုံးပိတ်ရက်ဆို.. ပို ရောင်းရသလို.. ဆိုင်လည်းစောစောပိတ်တယ်.. အဲလိုနေမျိုးဆိုရင်..မသီတာ..နဲ့..ထမင်းအတူစား ဖြစ်ကြတယ်..
''အမ..ကလေးမယူဘူးလား.. ''ခု တော့..ယူထားတယ်.. ရ..မရတော့.မစစ်ရသေးဘူး..'' အိမ်ထောင်သည်မှန်း မသိသာဖူးနော်..အမက..အပျိုတိုင်းပဲ. .''မ ဟုတ်တာမင်းမင်းရယ်..'' တကယ်ပြောတာ..'''တချို့ယောက်ကျားလေး တွေ..အမကိုအရမ်းကြည့်တာ..'' ဟုတ်လို့လားကွယ်..ဟင်း.ဟင်း.. ''ကျတော်ကြုံရင်..ကြုံသလိုလှတဲ့အကြောင်းတွေ..ပြောဖြစ်တယ်.ဒီညတော့.မသီတာလည်း.. တော်တော်နဲ့မအိပ်ဖူး..ညဝတ်ဂါဝန်နဲ့.. စကားတွေထိုင်ပြောနေတယ်..အတွင်းက.. ဘာမှမဝတ်ထားဘူး..နို့တွေမြင်နေရတယ်.. ခဏနေတော့.. အိပ်တော့မယ်ဆိုပြီး.အိမ်ရှေတံခါးကို. သွား ပိတ်တော့.မသီတာရဲ့ နောက်ပိုင်းအလှကိုကြည့် ပြီး..လီးကတောင်လာပြီး..''မင်းမင်း..စောစော အိပ်နော်''ဆိုပြီး.အခန်းးထဲဝင်သွားတယ်... မနေ နိုင်တော့ပဲ..အိပ်သာထဲဝင်.. ထုလိုက်တော့တယ်.....တနေ့ထက်တနေ့.. မသီတာပေါ်ကျတော်..လိုးချင်စိတ်တွေ.. ပိုပိုဖြစ်လာတယ်..ပစ္စည်းတွေကုန်းနှိုက်တဲ့အချိန်..အသားချင်း..ထိသွား တဲ့အ ချိန်တွေဆို..ကျတော့လီးက.တောင်နေပြီ... လက်သမားပဲလုပ်ရတာပေါ့....အရမ်းပင်ပန်းတဲ့ နေ့ဆို..မသီတာ..စောစောအိပ်ယာဝင်တယ်.. ဆိုင်သိမ်းပြီး..မအိပ်ခင်..အပေါ့သွားမယ်ဆိုပြီး.. အိမ်သာအသွား..မသီတာအခန်းရှေ့ရောက်တော့..တံခါးလည်းမပိတ်..မီးလည်းမမှိတ်တော့..အခန်းထဲထိန်ထိန်သာနေတယ်..မသီတာ..အိပ်နေပုံကို ကြည့်လိုက်တော့..လက်တဖက်ကိုနဖူးပေါ်တင်..လက်တစ်ဖက်က.ဘေးချထားပြီး..ဒူးတစ် ဖက်ကထောင်ထားတယ်..ညအိပ်ဂါဝန်က. ထောင်ထားတဲ့ဒူးကလွန်ပြီး..ပေါင်ရင်းအထိ.. လန်တက်နေတယ်..အရင်းတုတ်ခိုင်ပြီးသွယ်လျတဲ့ပေါင်ရင်းဆီကြည့်လိုက်တော့..မီးရောင် ကွယ်နေတော့..ခပ်ရေးရေးလေးပဲမြင်ရတယ်...အသက်ကလည်းပုံမှန်ရှူနေတော့..နို့အုံကြီးတွေကနိမ့်လိုက်မြှင့်လိုက်နဲ့..ကျတော်ကြည့်ရင်း..အာခေါင်တွေခြောက်လာတယ်..လက်တွေ လည်းတဆက်ဆက်တုန်နေပြီး..ငပဲကိုကိုင်းပြီး ဂွင်းထုမယ်လုပ်တုန်း...'''ဟင်း..''ဆိုပြီး.. လက်ကား..ပေါင်ကား..လုပ်လိုက်တော့. .ခုဏက..ရေးရေး လေးမြင်နေရတဲ့နေရာက.. .စောက်မွေးတွေ.. မည်းနက်နေပြီး.. မို့ဖောင်းနေတဲ့..မသီတာ.. စောက်ဖုတ်ကြီးကို..ထင်ထင်ရှားရှားမြင်ရပြီ...ကျတော်လည်း..မှန်းပြီးထုလိုက်တာ..ခဏတွင်းပဲ..ပြီးသွားတော့တယ်..လရည်တွေသုတ်..အပေါ့သွားပြီး...အိပ်ယာဝင်တော့တာပေါ့.....မနက် ရောက်တော့မနိုးဘူး....''မင်းမင်းရေ...မင်းမင်း. .''မသီတာ..ကျတော့လာနိုးတာလေ..လီးက တောင်နေတော့..တံခါးဘက်လှည့်.အိပ်ချင်ယောင်ဆောင်နေလိုက်တယ်...''မင်းမင်းရေ.. မင်းမင်း..''..နိုးမရတော့..အခန်းထဲဝင်ရင်ဆိုပဲ....ကျတော့.လီး.က.၉၀ဒီဂရီ.. ထောင်မတ်နေတာကို. .ကြည့်ပြီး..ပါးစပ်ကို.လက်နှစ်ဖက်နဲ့ပိတ်ကာ.. မှင်သက်စွာကြည့်နေတာကို..ကျတော့မျက်လုံး ထောင့်စွန်းမှမြင်နေရတယ်.... အပြင်ပြန်ထွက်သွား ပြီး..ပြန်ခေါ်နိုးနေတယ်.. ကျတော့လည်း..''ဟုတ်..ဟုတ်..မသီတာ..'' ဆိုပြီး..အိပ်ယာသိမ်းထလာပါတော့တယ်.. မနက်စာ..အတူစားတော့..မမသီတာ..မျက်နှာကပန်းရောင်သန်းနေတယ်..ကျတော့ကိုမျက်နှာချင်းမဆိုင်ဘူး..''မသီတာ..ဘာဖြစ်လို့လည်း..'' ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကွယ်..နေရတာတစ်မျိုးကြီး ဖြစ်နေလို့..''မသီတာ..နားလေ..ကျတော်ဈေး ရောင်းလိုက်မယ်..''..''ဒီနေ့..ဆိုင်ပိတ်လိုက်ပါ မင်းမင်းရယ်..အမလည်း..နားချင်လို့.. မင်းမင်းလည်းနားရတာပေါ့.''..ဪ..ဟုတ်ကဲ့..ဟုတ်ကဲ့..''''..ကျတော်ဘာလုပ်ပေးရမလဲ..အမ''.. ရတယ်..ရတယ်..'''..တစ်ခုခု..သောက်လိုက်ပါလား..''မသီတာ..ယောက်ကျားနဲ့..ဝေးနေတော့.. စိတ်တွေဂယောက်ဂယက်ဖြစ်နေမှာ.ကျတော့လီးကိုလည်းမြင်ထားတော့. အလိုးခံချင်စိတ်တွေဖြစ်နေမှာပေါ့.. ကျတော်လည်း..မသီတာကို..ဘယ်လိုစရ မှန်းမသိဖြစ်နေတယ်..အိမ်သန့်ရှင်း အတူလုပ်နေကြတယ်.. ကုန်းကုန်းကွကွလုပ်လေ..စိတ်က.. ပိုလိုးချင်လေ.ဖြစ်နေတယ်.. ဘယ်လိုမှထိမ်းမရတော့ဖူး အိမ်သာထဲဝင်..ဂွင်းထုပလိုက်တယ်.. ပြီးပြီးချင်..မသီတာကတံခါးခေါက်. .''မင်းမင်းရေ..ငါအိမ်သာတက်ချင်လို့မြန်မြန်..'''.
""ဟုတ်..''အမ..ဆိုပြီး... လရည်တွေတောင်..မဆေးရသေးဘူး.. ထွက်လာ လိုက်တယ်..
""အမ..ဖင်ကြီးတွေကြည့်ပြီး.. လိုးချင်စိတ်တွေ ဖြစ်လာလို့ပါ'''.
ကျတော့ကို.လက်ဆွဲပြီး..အခန်းထဲ..ခေါ်သွား တယ်.. ""ဟဲ့.လာလေ..ငါ့ကိုလိုးချင်တယ်မဟုတ်လား.. နင်ကခိုးလည်းခိုးချင်တယ်..လက်ကလည်းချာတာ..'' ကျတော့အကျီ င်္ င်္..ပုဆိုးတွေကို..မသီတာကချွတ်ပေးပြီး.. သူ့အဝတ်အစားတွေလည်း ချွတ်လိုက်တယ်...မသီတာကိုကြည့်ပြီး.. လီးကြီးက..ငေါ့ငေါ့ထောင်လာတယ်.. ကုတင်ပေါ်တက်.ပေါင်ကားပြီး စောက်ဖုတ်ကြီးကိုဖြဲထားပေးတယ်.. ကျတော်မအောင့်နိုင်တော့ပဲ..လီးထိပ်ကြီးဖြင့်.. မသီတာဖင်ကြားကို..ဆောင့်လိုး ထည့်လိုက်တယ်.. ""အို့..ဘယ်လိုလုပ်နေတာလဲ'' လီးကို..မသီတာလက်နဲ့လှမ်းကိုင်တာ.. စောက်ဖုတ်ဝမှာ.တေ့ပေးသည်.. ကျတော်လည်းဆောင့်လိုးထည့်လိုက်သည်..
ကျတော် ဆင့်ကာဆင့်ကာ ဆောင့်လိုးပေးလိုက်တယ်..
ကျတော့ရဲ့တင်ပါးတွေကို..အတင်းဖတ်ပြီး..လက်သဲများနဲ့ကုတ်ဆွဲထားတယ်..အဲလို.. လက်သဲနဲ့ကုတ်လိုက်တော့..မသီတာ.. စောက်ဖုတ်ထဲက..ကျတော့လီးက.. သံချောင်းပမာ..ပိုမာကျောသွားသည်။ အားထည့်ပြီးဆောင့်တာ...
အား..အား..အင်း..အင်း..ကျွတ်..ကျွတ်.... အ..အ..မင်းမင်းရယ်..ကောင့း်လွန်းလို့ပါ.. ဆောင့်ပါ.....အား...ပြီးတော့မယ်.. .ပြီးတော.့.မယ်..ဆောင့်ပါ...ဆောင့်လိုးပါ..
တင်ပါးများကို..ကော့ကော့ထိုးပြီး.... ကာမစိတ်တက်ကြွကာ.. အငမ်းမရဖြစ်နေသည်....... ""အား..အား..အား..အီး....
အား..အင်း..ဟင်း..အိုး..အိုး. ဘွတ်..ဗျစ်....ဇွိ....ပြွတ်...အမလေး..ကောင်း လိုက်တာ...အိုး..အိုး..လိုး..လိုး....အီး..ထွက်ပြီ......
နောက်ပိုင်း..မသီတာနဲ့..တခန်းထဲအိပ်ပြီး.. ညတိုင်းလိုလို..လိုးဖြစ်ကြသည့်။ပုံစံမျိုးစုံလို့တဲ့ အပြင်..မသီတာ..စောက်ဖုတ်ကို..စိတ်ပါလက်ပါ..နမ်းပေးသေးသည်..ကျတော့ရဲ့.အပြုအစုများ ကြောင့်..မသီတာ..မခံရ..မနေနိုင်အောင်ဖြစ်လာသည်..ဦးလေးပြန်ရောက်တဲ့ညက..အရက်မူးလာသည်..ရောက်ရောက်ခြင်းပဲ..အခန်းထဲတန်းဝင် ပြီး..မသီတာကို..လိုးပါသည်..ဦးလေးကပြီးသွား တော့...ပင်ပန်းလာလို့လားမသိ..အိပ်ပျော်သွားတယ်....မသီတာ..အပြင်ထွက်လာပြီး.... "မင်းမင်း..မင်းမင်း..'' အသံလေးအုပ်ပြီးခေါ်တယ်.. ""နင့်..ဦးလေးက..ခဏလေးလိုးပြီး..အိပ်နေတယ် အမ..စောက်ပတ်က..အရမ်းယားနေပြီ.. လိုးရအောင်'''ဆိုပြီး...ရေချိုးခန်းထဲခေါ်သွားတယ်..ရေချိုးခန်းရောက်တော့...ဂါဝန်ကို..ချွတ်လိုက် ပြီး..နံရံကို..လက်ထောက်ကာ..ကုန်းပေးသည်.....ကျတောက်လည်း..တင်ပါးနှစ်ဖတ်ကိုင်ပြီး. .ဆောင့်လိုးလိုက်သည်..
မသီတာ..တင်ပါးကြီး..ကော့ထားတော့..မလိုး သေးပဲ..တင်ပါးကို၂ချက်၃ချက်ရိုက်ပြီး..လက်ကို မှောက်ခုံထားကာ..မသီတာ..စောက်ဖုတ်ကြီးကို..နှိုက်သည်..မသီတာ..ကော့တက်သွားသည်....လက်ကို..အသွင်းအထုတ်လုပ်ပေးရင်..စအိုလေးကို..လျှာနဲ့ယက်ပေးလိုက်ရာ...မသီတာ.ထွန့်ထွန့်ကိုလူးနေသည်....
မတ်တက်ရပ်ပြီး..မသီတာ.တင်ပါးကြီးကို.. လီးနဲ့.၃..၄ချက်ရိုက်ပေးလိုက်တော့..ရမ္မက်ခိုးငွေ့တွေအပြည့်နဲ့ကျတော့ကိုကြည့်လာတယ်.. နှုတ်ခမ်းလေးကိုနမ်းစုပ်ပေးပြီး.. "လိုးပေးတော့မယ်နော်'' မသီတာ..ခေါင်းလေးညိတ်ပြီး..လက်ထောက်ပြီး ကုန်းပေးတယ်..တင်ပါးထိပ်ကကိုင်ကာဆောင့်လိုးထည့်လိုက်သည်..
မသီတာ..စောက်ခေါင်းထဲ..သုတ်ရည်များ.. ပန်းထည့်လိုက်ပါတော့သည်.... ဦးလေး..အလုပ်ရှာပေးတာ..အိမ်ကားမောင်းအလုပ်ရသည်..နေ့ဘက်မောင်းပြီး..ညဘက်ဦးလေးအိမ်မှာပြန်အိပ်တယ်..၃..၄လကြာတော့...မသီတာမှာ..ကိုယ်ဝန်ရှိလာတယ်..ဘယ်သူ့ကိုယ် ဝန်လည်း..အတိအကျမသိပေမယ်.့.ကျတော်တို့တူရီးနှစ်ယောက်ရဲ့..ကိုယ်ဝန်တော့သေချာပါ တယ်...ဦးလေးကလည်းမကြာခဏ..ခရီး ထွက်သလို..အလုပ်ရှင်သဌေးကလည်း..နိုင်ငံခြားမကြာခဏသွားတယ်...ဘော့စ်ခရီးမထွက်ခင်ညဆို..ဦးလေးအိမ်မပြန်ရပဲ..ဘော့စ်အိမ်မှာသာ .အိပ်ရသည်..ကျတော့..ဘောစ့်က..နိုင်ငံခြားနဲ့ ဖက်ဆက်အလုပ်..လုပ်တယ်နဲ့တူတယ်..အစည်းအဝေးလည်းတက်ရတယ်..ဘော့စ်မိန်းမနာမည် "နွယ်နွယ်ဝင်း''တဲ့..မမဝင်းလို့ပဲ..ခေါ်ကြတယ်... ကိုယ်ဝန်၅လကျော်ရှိတယ်...ဗိုက်က.. အနည်းငယ်..ပူနေပြီ....ကိုယ်ဝန်သည်အကျီ င်္တွေ ဝတ်ရင်..ဖြူဖွေးနေတာပဲ..သူဌေးဆိုပေမယ့်.. တန်းတူဆက်ဆံတယ်..ခုလည်းဘော့စ်ခရီး ထွက်တော.့အိမ်မှာနေပေးဖို့မှာတာနဲ့....ဦးလေးအိမ်မပြန်ရတော့ဘူး...အိမ်ကိစ္စကူလုပ်..မမဝင်းအပြင်ထွက်ချင်လိုက်ပို့နဲ့..အချိန်တွေကုန်ခဲ့တယ်..မမဝင်းနဲ့လည်းအရမ်းကိုရင်းနှီးနေပြီ...ပြောမနာဆိုမနာတွေဖြစ်နေပြီ..တနေ့တော့..မမဝင်းကငို နေတယ်..ဘာလို့လဲမေးလိုက်တော့..ဘာမှမ ပြောဘူး... ""မမဝင်းရယ်..မငိုပါနဲ့ဗျာ...'' မျက်ရည်တွေသုတ်ပေးနေတယ်....အသားလေးကလည်းတော်တော်နူးညံ့တယ်ဗျ..ဟိုပွတ်ဒီပွတ် လုပ်ပေးရင်း.မမဝင်းက..ဘာမပြောညာမပြောနဲ့....ကျတော့နှုတ်ခမ်းကိုစုပ်လိုက်တယ်..ကျတော် လည်း..လျှာနဲ့ပြန်ကလိပေးလိုက်တယ်....နို့တွေကလည်းကိုယ်ဝန်ရှိလို့လားမသိ..တော်တော်ကြီးတယ်..အကျီ င်္ပေါ်ကရွရွလေးပွတ်ပေးနေတယ်... ""မင်းမင်း..မမဝင်းကို..အထင်သေးသွားပြီလား..'' "အထင်မသေးပါဘူး..မမဝင်းရယ်..ပုထုဇဉ်ပဲ.. အမှန်တိုင်းပြောရရင်..မမဝင်းကို..လိုးချင်နေတာ ကြာပြီ...'' "ဘာလို့လဲ.'' ""မမဝင်းအသားအရည်တွေရယ်..ဖူးယောင်နေတဲ့.......နှုတ့်ခမ်းလေးတွေရယ်....မမဝင်းရေချိုးရင်တွေ့ရတဲ့..ဖင်သားကောက်ကောက်ကြီးတွေကို...စိတ်နဲ့မှန်းပြီး..လိုးချင်နေတာပါ'' ပြောရင်း..မမဝင်းဂါဝန်ကိုချွတ်လိုက်တော့.. ဗိုက်ကပူပူလေး..ဆိုဖာပေါ်မှာပဲထိုင်ခိုင်ပြီး...အသာလေးလှဲလိုက်ပါတယ်...ပေါင်လေးကိုကား လိုက်ပြီး..ပြဲအာနေသော..စောက်ဖုတ်လှလှလေးကို..လျှာနဲ့..ယက်လိုက်ပါတယ်.... ""အို..မင်းမင်း..မလုပ်နဲ့လေ...ဖုန်းနိမ့်မှာပေါ့..'' ပေါင်ကိုအတင်းစိထားပါတယ်...ပေါင်းသားလေးတွေယက်...ပြူးထွက်နေတဲ့အဖုတ်ကို..ယက် နေတော့..စိထားတဲ့ပေါင်က..တဖြည်းဖြည်းကားလာပါတယ်...ပေါင်ဂွစုံကိုယက်...စအိုနဲ့စောက် ဖုတ်တောက်လျောက်ယက်ပေးလိုက်တော့.. မမဝင်း..တင်ပါးကြီးတွေကော့တက်လာတယ်...အဲခါကျမှ..စောက်ဖုတ်ကို..အလျားလိုက်.. ယက်ပေးလိုက်...စောက်စေ့ကို.လျှာထိပ်နဲ့ထိုး... တခါတခါ..စုပ်လိုက်နဲ့..လုပ်နေတာ... "အိုး..အိုး..အား..အား..အမလေး...ဟင်း..ဟင်း.. မင်းမင်း...အား..အား...ကျွတ်..ကျွတ်..ဟင်း..အို'' မမဝင်း..အရမ်းကောင်းနေပြီ...ကျတော်လည်း..လက်သူကြွယ်...လက်ခလယ်ကို.. ပက်လက်ထားပြီး..မမဝင်းစောက်ဖုတ်ထဲထည့်လိုက်ပါတယ်..လက်နှစ်ချောင်းက..အတွင်းသား များကို..လိုက်စမ်းနေသလို..ဟိုဖိ..ဒီဖိလုပ်ပေးနေပါတယ်....စောက်စေ့ကိုလည်း..စုပ်လိုက်. ယက်လိုက်နဲ့..ဘယ်လက်ကလည်း..မမဝင်းရဲ့..နို့သီးလေးကို..လှမ်းကိုင်ထားသေးတယ်.. မမဝင်းခဗျာ..
"အမလေး..အား..အား.. ဟင်း..မင်းမင်း..ဟင့်. ..
မရတော့ဖူး..အား..အား.. ထွက်ကုန်ပြီ..ထွက်.. ထွက်...အား..အ..အ...''
ပန်းထုတ်လိုက်ပါသည်.. ဆက်လက်ထွက်နေတဲ့.. စောက်ရည်လက်ကျန်များကိုလည်း... လျှာနဲ့သိမ်းယက်ပေးလိုက်ပါသည်.... ကျတော့လုပ်ရက်ကို ကြည့်ပြီး..မမဝင်းက..အားတုံ့အားနာနဲ့.. "မင်းမင်းရယ်..အားနားလိုက်တာ... မမဘဝမှာ.. ဒါပထမဆုံး..အနမ်းခံဖူးတာပဲ... ရင်ထဲမှာ..ပြောပြမတက်အောင်.. အရမ်းကောင်းလွန်းတယ်ကွယ်." ထိုသို့ပြောရင်း..ကျတော့လီးကို.. ဂွင်းထုပေးနေတယ်... "မင်းမင်း..မမကိုလိုးချင်နေပြီလား...'' "မလုပ်ပါနဲ့..မမဝင်းရယ်..ဗိုက်ထဲကလေးကို ထိသွားပါ့မယ်...'' ""အို..ဘာဆိုင်လို့လဲ..မင်းမင်းရယ်.. ထိတယ်ဆိုတာ..အရမ်းကြမ်းမှပါ.. ညင်ညင်သာသာလိုးရင်ရတယ်..'' ""မမဝင်းက ရင်သွေးလွယ်ထားတော့.. အလိုးခံချင်စိတ်ရှိလို့လား'' "ဘယ်လိုပြောလိုက်တာလဲမင်းမင်းရယ်... မမ.ယောက်ကျားတောင်.. မဖြစ်မနေမို့ လွတ်လိုက်တာ..မမွေးမချင်း.. ဘယ်မှသွားစေချင်တာမဟုတ်ဘူး... အဲဒီအမွေးခင်အချိန်ထိ.. အရမ်းကို..အလိုးခံချင်တာ.. မိန်းမတိုင်းနီးပါးပဲ''' ""ဪ..ဟုတ်လား..မမဝင်း..ကျတော်က.. ကိုယ်ဝန်ရှိ ရင်လိုးမရဘူးထင်နေတာဗျ..'' ""လိုးမရဘူးဆိုတာ..ကလေးမွေးပြီး..၁လခွဲ..၂လလောက်ကိုပြောတာ...သွေးနုသားနုတဲ့ အချိန်ပေါ့.အချို့လည်းလိုးတယ်.. မိန်းကလေးကိုထိတာပေါ့...'' ""မင်းမင်းလီးက.မကျဖူးနော်... အရမ်းလိုးချင်နေလား..လိုးတော့လေ..'' ပြီးတော့..မမဝင်းက..ကျတော့အတွက်.. ပုဇွန်ထုပ်ပုံစံ..ကွေးကွေးလေး..နေပေးထားတယ်..တင်ပါးလေးအသာတွန်းပြီး.. လီးကိုတစ်ဝက် ထည့်ပြီး..ဖြည်းဖြည်းပဲ..လိုးပေးနေတယ်.. ခဏနေတော့..စောက်ရည်တွေ လိုက်လာပြီး.. "မင်းမင်းအဆုံးထိလိုး..ရတယ်.မညှာနဲ့..လိုး'' ခါးအားပြုပြီး..ကပ်ညှောင့်ပြီး လိုးပေးနေတယ်.. "ဘွတ်..ဘွတ်..ပြွပ်..ပြွတ်..'' "အား..အား..ဟင်း.ဟင်း ကောင်းတယ်..
လိုးပေး.. ဟင်း..ဟင်း..အို..အိုး မင်းမင်း..အား..အာ.း...ကျွတ်..ကျွတ်.. .
'မမဝင်းက..အော်လေ.. စောက်ပတ်ကြီးက..ကျဉ်းသွားလားမသိဘူး..လီးကို..ညှစ်ညှစ်ထားတယ်..အချက်၂၀လောက်..ဆက်တိုက်ဆောင့်ပြီး... မမဝင်း..စောက်ဖုတ်ထဲသုတ်ရည်. .ပန်းထည့်ပေးလိုက်ပါသည်။ ဘော့စ်မလာခင်အချိန်ထိ..မမဝင်းရဲ့.. စိတ်လိုအပ်ချက်တွေကို..နေ့ညမပျက်.. ဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့ပါသည်။ဘော့စ်ပြန်လာ တော့..ကျတော့အတွက်..လက်ဆောင်များယူဆောင်ခဲ့ပါ သေးသည်။ကျေးဇူးတင်စကား.. ပြောဆိုပြီး နောက်ဖေး၌အအေးဖျော်နေသော.. မမဝင်းဆီသွား၍..အာဘွားပေး. နှုတ်ဆက်ကာ. .ဦးလေးအိမ်..ပြန်လာခဲ့ပါသည်။ အိမ်ရောက်တော့..ဦးလေးနဲ့တန်းတိုးတာပဲ.. "မင်းပြန်လာတာနဲ့အတော်ပဲ..ငါနက်ဖြန်ခရီးထွက်ရမှာ..မင်းအမက.. ကိုယ်ဝန်နဲ့ဆိုတော့ ညရေးညတာ..စိတ်မချဘူး.... လိုအပ်တာ.လုပ်ပေးလိုက်ပါကွာ...''
"စိတ်ချပါ..ဦးလေးရာ.. ကျတော်ဂရုစိုက်ပါ့မယ်.. စိတ်ဖြောင့်ဖြောင့်သွား...''
'..စိတ်ထဲကတောင် နာမည်ပေးလိုက်သေးတယ်.. '''ဪ..ငါ့ဘဝက ဗိုက်စောင့်(ဆောင့်)မင်းမင်းဖြစ်နေ ပါရောလား'''''..
ဘော်လီဝတ်မထားတော့..နို့တွေပါကိုင်ပေး. .ပါးဖောင်းဖောင်းလေးကိုလည်း..နမ်း ဂုတ်သားကို..လျှာနဲ့ယက်လိုက်တော့.. မသီတာမနေတက်တော့ဘူး..
"အို..မင်းမင်း..ယားတယ်ကွယ်.. အိုး..အိုး..ကြည့်ပါလား..ဟင်း... ဟင်း..ကျွတ်..ကျွတ်...
'' မသီတာ..စောက်ဖုတ်ကို..ကိုင်တော့... စောက်ရည်တွေ..ရွှဲနေပြီ....
အခန်းထဲရောက်တော့.. မသီတာကိုအရင်ချွတ် ပေးလိုက်တယ်..ကျတော်က..
အတွင်းခံမှလွဲ၍ ကျန်တာ..ဘာမှ..ရှိတော့ဘူး..ကုတင်ပေါ်.. ပက်လက်လှန်ခိုင်းလိုက်တယ်... စောက်ဖုတ်လက်နဲ့ကလိပေး. ကျန်လက်ရဲ့လက်မက. .စောက်စေ့ကို..ဖိဖိပြီးပွတ်ပေးနေတယ်.. စောက်ပက်နှုတ်ခမ်းတွေကို.. လျှာနဲ့ယက်ပေး လိုက်..စောက်စေ့ကို..စုပ်လိုက်.. သွားနဲ့ကိုက် လိုက်လုပ်ပေးနေတော့..
ပွတ်သပ်ပေးနေတော့.. ပြီးတော့..လက်မနှစ်ချောင်းနဲ့အတွင်းခံကို.. ချွတ်လိုက်တော့.မြွေပုစဉ်း ထောင်လာသလို.. ငေါက်ကထဲ..ထွက်လာတယ်..လီးကိုဘယ် လက်နဲ့ကိုင်ပြီး..လဥကို..လျှာနဲ့ယက်ပေးနေ တယ်..ယက်လို့ ...ဝသွားတော့..လီးနဲ့.. သူ့ပါးစပ်ကိုရိုက်လိုက်သေးတယ်.. ဒစ်ကို..အသာငုံလိုက်.. လျှာနဲ့ယက်လိုက် ဆီးပေါက်ကို..လျှာထိပ်နဲ့ထိုးလိုက်... လီးဒစ်ကိုငုံထားရာကနေ..လီးတချောင်းလုံး. စုပ်လိုက်တော့ "အို..အမ..အား..အား..'' "ကောင်းတယ်..အမရယ်..''.. ..ပြောကာမှာ..အဆက်မပြက်ကိုစုပ်နေ တော့တယ်.. ကျတော်လည်း ကောင်းလာတော့.. ဆံပင်တွေကိုင်..လီးကို..မသီတာပါးစပ်ထဲ.. ကော့ကော့ထိုးပေးနေတယ်..အာခေါင်တွေ.. ထိုးမိတော့.''ဒုတ်..ဒုတ်..''နဲ့....သုတ်.. မနဲကိုထိမ်းထားရတယ်.. "မသီတာ..ကျတော့ကို..အပေါ်ကလိုးပေး'' "ဖြစ်ပါ့မလား..မင်းမင်းရယ်...'' "သိပ့်ဖြစ်တာပေါ့..'' ပက်လက်လှန်ပေးလိုက်တော့.. အပေါ်ကတက်ခွ..လီးကိုကိုင်.. သူ့စောက်ဖုတ်ဝတေ့ပြီး.. ထိုင်ချလိုက်တယ်.. "ဇွိ..ဇွိ..ဘွတ်..ဘွတ်..ပြွတ်ဗြွတ်''
ဗိုက်ထောက်နေတော့.. လက်ထောက်လို့မရဘူး ဖြစ်နေတယ်.
.မသီတာ.. စောက်ဖုတ်ကို..ကုန်းယက် လိုက်သေးတယ်...ပြီးတော့.. စောက်ခေါင်းဝလီး တေ့ဆောင့်လိုက်တယ်..''ဘွတ်..ဗြွတ်. .ဗျိ..ဒုက်'' "အား..အမလေး..ကြမ်းလိုက်တာ မင်းမင်းရယ်'' "အင်း..အင်း..အား..အား..အိုး..အင်း..ဟင်း ကျွတ်..ကျွတ်..အား..အား..ကောင်းတယ်...အ..အား...ဆောင့်..ဆောင့်..အမလေး.. လိုး..လိုး'' လီးခဏချွတ်ပြီး..မသီတာကို.. တစောင်းအနေအထား..ပြုပြင်လိုက်တယ်.. ပြီးတာနဲ့..လီးတေ့.. ဆောင့်လိုးထည့်လိုက်တယ်..
အရမ်းလိုးတက်တယ်..စောက်ခေါင်းထဲံလဲ..နံရံတွေ..အရမ်းထိတယ်.. ကောင်းတယ်
ပြီးတော့မယ်..ပြီးတော့မယ်. မင်းမင်း..မရပ်နဲ့.. မရပ်နဲ့.
...အား.အား..အ'' မသီတာပြီးသွားသလို..ကျတော်လည်း.. လီးအဆုံးထိးု့ထည့်..သုတ်ရည်များ.. ပန်းထည့်ကာပြီးလိုက်ပါတော့သည်။ ပြီးပါပြီ။